Romance – MMANIME
Josee, the Tiger and the Fish Josee, the Tiger and the Fish (2021) Genres: Slice of life, Drama, Romance Released Date: May 19, 2021 Runtime: 1h 38m ဒီကားလေးကတော့ ထွေထွေထူးထူး ပြောစရာမလိုပါဘူး။ လူငယ်တွေရဲ့ အချစ်ရိုမန်အကြောင်း တစ်မျိုးတစ်ဖုံ ရိုက်ကူးပြသထားတာပါ။ ရေငုပ်ကာ ငါးတွေကိုလေ့လာရတာ နှစ်သက်ပြီး မက္ကဆီကိုတက္ကသိုလ်မှာ ပညာတော်သင်သွားချင်လို့ ရည်မှန်းချက်အတွက် အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ကြိုးစားနေတဲ့ ကောလိပ်ကျောင်းသား Tsuneo.. မသန်စွမ်းဖြစ်လို့ အပြင်မထွက်နိုင်ဘဲ ဝှီးချဲပေါ်မှာသာ နေရတဲ့ Josee.. ကမ္ဘာကြီးကို သူ(မ)နှစ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေထဲကနေ စိတ်ကူးယဉ်ပုံဖော်ပြီး သူ့သဘောအတိုင်းနေတတ်တဲ့ မိန်းကလေး.. တစ်နေ့မှာ သူတို့နှစ်ယောက် ဆန်းကြယ်စွာဆုံတွေ့ခဲ့ကြပြီး Tsuneo က Josee ကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့ ဖြစ်လာရာကနေ ဂျစ်ကန်ကန်နေတတ်တဲ့ Josee တစ်ယောက်ကို စိတ်ရှည်ရှည် လိုက်လျောစောင့်ရှောက်ကာ သူတို့နှစ်ယောက်ကြား ဖြည်းဖြည်းချင်း ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးကို ကြည့်ရှုရမှာပါ။ #otaku_kingdom_myanmar
The Stranger by the Beach(2020) Happy Pride Month! ကမ်း ခြေ နား က သူ စိမ်း တစ် ယောက် (2020) IMDB: 7.3/10 MAl: 8/10 "ကျွန် တော် မိန်း က လေး ‌တွေ ကို သ‌ ဘော ကျ ပါ တယ်။ ဒါ‌ ပေ မဲ့ Shun ကို တော့ ချစ် တယ်" ~Mio ဒီ ကား လေး က တော့ BL လော က မှာ နာ မည် ကြီး တဲ့ Manga လေး ကို Anime အ ဖြစ် ပြန် လည် အ သက် သွင်း ထား တာ ပါ ကျွန်း မြို့ ...
The Stranger by the Beach(2020)
Love, Be Loved, Leave, Be Left ဒီဇာတ်လမ်းလေးကတော့ စော်ငြင်းကောင် ဘဲငြင်းမတွေရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် Step family plot လည်း ပါဝင်ထားပြီး "Oh my god, step bro. I'm stuck. Can you help me?" ဆိုတာမျိုး မပါဝင်တာကြောင့် မိသားစုနဲ့အတူကြည့်လို့ရပါတယ် Reivew လေးဆီသွားလိုက်ရအောင် Review - Ichihara Yuna နဲ့ Yamamoto Akari တို့ဟာ အထက်တန်းကျောင်းသူလေးတွေဖြစ်ကြပြီးတော့ နှစ်ယောက်လုံးဟာ အချစ်ဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာ အမြင်ချင်းမတူညီကြပါဘူး။ ချစ်ခွင့်ပန်ထားသူနဲ့ ချိန်းဆိုထားတဲ့ Akari ဟာအခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့် စည်းခြားခဲ့ရပြီး Yuna နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ သူမရဲ့နှလုံးသားဟာ တဖန်နိုးကြားလာခဲ့ပါတယ်။ ချစ်ဖူးသူတိုင်းနာကျင်မှုဆိုတာကတော့ မလွဲမသွေပါပဲ။ Yuna က သူ့မစိတ်ကူးထဲကမင်းသားလေးအဖြစ် နေရာယူလိုက်တဲ့ ရွှေမင်းသားလေးနဲ့Akari တို့ဆက်နွယ်မှုကိုသိရှိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ဘယ်လိုအချစ်ဇာတ်လမ်းမျိုးဖြစ်လာမယ် ၊ ဘယ်လိုလက်နှေးရင်ခွက်ဆေးရမယ် ခွက်မဆေးရအောင် ဘယ်လိုလက်သွက်ရမယ်ဆိုတာကို ကြည့်ရှုခံစားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်
Given Movie မှာက Akihiko ရဲ့အချစ်အကြောင်းလေးကို အဓိကထားပြီးရိုက်ထားတာပါ ဒီ Movie လေးထဲမှာက Manga နဲ့အရမ်းကြီးကွဲလွဲတာမျိုးမရှိပဲ အတော်လေးကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဗျ ကိုယ်ကတော့တကယ်သဘောကျလို့ ခဏခဏပြန်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ် ကြည့်လိုက်ကြပါအုံးဗျာ ဒီ movie လေးကြည့်ရင်းနဲ့ တခါတစ်လေ လက်လွှတ်လိုက်တာကလည်း မုန်းလို့မဟုတ်ပဲ ချစ်လို့ဆိုတာသိလိုက်ရတယ် 720p 1080p
Nisekoi: False Love Raku Ichijo ဆိုတာ ယာကူဇာဂိုဏ်းရဲ့ ဆက်ခံသူဖြစ်ပေမယ့် အကြမ်းဖက်ခြင်းကို မနှစ်သက်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ သူက သာမန်ဘဝကိုပဲ လိုချင်ပြီး ငယ်ငယ်တုန်းက လက်ထပ်ဖို့အတွက် ကတိထားခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးကို လိုက်ရှာနေခဲ့ပါတယ်။ Kirisaki Chitoge ဆိုတာတော့ ယာကူဇာဂိုဏ်းရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် Beehive ဂိုဏ်းချုပ်ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသောသမီးလေးပါ။ ဂိုဏ်းကြီး ၂ ဂိုဏ်းရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ပဋိပက္ခတွေကြောင့် ဂိုဏ်းချုပ် ၂ ယောက်က အကြံတစ်ခုကို ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ သားနဲ့ သမီးကို ဟန်ဆောင်ရည်းစားတွေ လုပ်ခိုင်းဖို့ပါ။ ခက်တာက Raku နဲ့ Chitoge တို့ဟာ စတွေ့ကတည်းက ပဲပင်ပေါက်နဲ့ ဂေါ်ဇီလာလိုပဲ မတည့်ကြပါဘူး။ သူတို့ မတည့်အတူနေ ၂ ယောက် ဟန်ဆောင်ချစ်သူတွေ အဖြစ် ဘယ်လို ခရီးဆက်ကြမလဲ....Rakuနဲ့ ငယ်ငယ်က လက်ထပ်ဖို့ ကတိထားခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးကရော ဘယ်သူလဲဆိုတာ ...
Saekano the Movie: Finale After blessing software announced their first work, Eriri and Utaha leave the group to join popular creator Akane Kosaka in developingamajor game called Fields Chronicle. Meanwhile, Tomoya and Megumi join hands with their new members and various other parties to produce their new game. What will become of Eriri and Utaha’s major work? Will the relationship between Tomoya ...
Eden of the East Movie I: The King of Eden ဂျပန်တစ်နိုင်ငံလုံးကို ဒုံးကျည်ဒဏ်ကနေကာကွယ်ပေးပြီးနောက်မှာတော့ Takizawa ချက်ချင်းပြောက်သွားခဲ့တယ် ဒုံးကျည်ပေါက်ကွဲမှုတွေအပြီးပြန်မပေါ်လာတဲ့ Takizawa အကြောင်းကို Saki စဉ်းစားနေတုန်းမှာဘဲ Selecao ဖုန်းကနေ message တစ်ခုဝင်လာခဲ့တယ် "Saki ယုံကြည်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါအမြတမ်းမင်းနဲ့အတူခရီးထွက်ခဲ့တယ့်နေရာမှာရှိနေတယ်" ဒီ message အရ Takizawa ဘယ်နေရာမှာရှိနိုင်လဲဆိုတာကိုတွေးမိတာ Saki တစ်ယောက်ဘဲရှိတယ် ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုပြီးကတည်းကပြောက်ကွယ်သွားတဲ့ သူက Saki နဲ့ခရီးအတူထွက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာ အမြဲတမ်းရှိနေမယ်ဆိုတဲ့ message တစ်စောင်သာချန်ထားခဲ့တယ် ဒီလိုနဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ခရီးစတင်ခဲ့တဲ့ New York ကို Saki လာခဲ့ပြီ Saki တစ်ယောက် သူတို့နှစ်ယောက်ခရီးစထွက်ခဲ့တဲ့နေရာကိုရောက်တော့ Takizawa ကိုတွေ့ပြီ ဒါပေမဲ့ သူမ သိတဲ့ Takizawa အနေနဲ့မဟုတ်တော့ဘူး မှတ်ဉာဏ်အဖျက်ခံထားရတဲ့ linuma အနေနဲ့သူတို့ပြန်ဆုံခဲ့တယ် Selecao ကစားပွဲကြီးကလည်းမပြီးသေးဘူး Takizawa လည်းမှတ်ဉာဏ်အဖျက်ခံလိုက်ရပြီ ဘယ်သူက supporter မှန်းလဲမသိကျသေးတဲ့အချိန်မှာ သူတို့ဘယ်လိုရရှေ့ဆက်ကြမလဲ နောက်ထပ်ဒုံးကျဉ်ဖောက်ခွဲမှုတွေထပ်ပြီးကျရောက်လာအုန်းမှာလားဆိုတာကိုတော့
I’ve Always Liked You I've Always Liked You ဆိုတဲ့ Anime ဇာတ်ကား လေးဟာလူငယ်အချစ်ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာ Tetsuya Yanagisawa ကရိုက်ကူးပြီး Qualia Animation Studio မှဖန်တီးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် Opening Song မှကတည်းက လိုရာဆန္ဒပြည့်မည်ဆိုတခြားသူအားလုံးပျော်ရွှင်စေဖို့ဆုတောင်းလိုက်မယ် မင်းလေးပျော်ရွှင်ဖို့ကိုတော့ငါကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမယ် ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့ဆွဲဆောင်သွားတဲ့ I've Always Liked You ဇာတ်ကားလေးဟာ Koyuki Ayase ၊ Hina Setoguchi ၊ Haruki Serizawa တို့ကြားကအချစ်ဇာတ်လမ်းကိုဖော်ကျူးထားတာဖြစ်ပါတယ် ကျောင်းမှာအမှတ်မထင်တွေ့ဆုံခဲ့ရတဲ့စီနီယာ Koyuki Ayase ကိုတစ်ဖက်သတ်ချစ်မိသွားခဲ့တဲ့ကောင်မလေး Hina Setoguchi Hina Setoguchi ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုငယ်ငယ်ကတည်းကချစ်လာခဲ့ရပေမယ့်အထက်တန်းရောက်တဲ့အထိတိုင်ဖွင့်မပြောဘဲမျိုသိပ်နေခဲ့ရတဲ့တစ်ဖက်သတ်အချစ်နဲ့ကောင်လေး Haruki Serizawa သူတို့တွေအထက်တန်းအောင်ပြီးချိန်မှာတော့စီနီယာကိုချစ်နေတဲ့ကောင်မလေး Hina ဟာ Koyuki တက်တဲ့တက္ကသိုလ်ကိုပဲလိုက်တက်ခဲ့ပြီး Hina ကိုတစ်ဖက်သတ်ချစ်နေတဲ့ကောင်လေး Haruki လဲ Hina နောက်လိုက်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးကဘယ်လိုအဆုံးသတ်မလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် #LCAM
A Whisker Away (2020) ♪～(´ε｀ )ရိုး သား ပွင့် လင်း လွန်း ပြီး အ ချစ် ကို ရူး သွပ် ‌တဲ့ Miyo ဆို တဲ့ ကောင် မ လေး တစ် ယောက် ဟာ "Muge" လို့ နာ မည် ပြောင် ပေး ခံ ရ ပါ တယ်သူ အ ရမ်း ချစ် ရ တဲ့ အ တန်း တူ Hinode ဟာ သူ့ ကို ပစ် ပစ် ခါ ခါ ဥ ပ က္ခော ပြု ထား ခဲ့ ပါ တယ်လူ့ ဘ ၀ နဲ့ Attention ...
Date A Live Movie: Mayuri Judgment Genres – Harem, Romance, Sci-Fi Duration– 1hr 12min Rating – PG-13 – Teens 13 or older Subtitle – Myanmar Subtitle Translated By –Zay Yell / Encoded By – Aung Kyaw Khant Resolution – 1920×1080 (Bluray)(663MB) Overview The movie adaptation announced at the end of the final episode of Date A Live II.
To the Forest of Firefly Lights (2011) 45 မိ နစ် တည်း နဲ့ မျက် ရည် တောက် တောက် ကျ ရ ပါ လိမ့် မယ်Review ပြော ပြ ရ ရင် တော့Hotaru ဆို တဲ့ က လေး မ လေး တစ် ယောက် ဟာ .. တော အုပ် ထဲ လမ်း ပျောက် ရင်း Gin ဆို တဲ့ ကောင် လေး တစ် ယောက် နဲ့ တွေ့ ဆုံ ခဲ့ ပါ တယ်က လေး မ လေး က သာ အ သက် ကြီး လာ ပေ မဲ့ ကောင် ...
Whisper Of The Heart IMDb 7.9/10Rotten Tomatoes 94% စာတွေဖတ်ရတာကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်နဲ့ကောင်လေးတယောက်တို့တွေ့ကြတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းပါဇာတ်လမ်းကိုသိပ်ရှည်ရှည်ဝေးဝေးညွှန်းလို့မကောင်းဘူးဗျရုပ်ရှင်မှာရသမြောက်အောင်ချပြတာနှစ်နည်းရှိတယ်အပြနဲ့ချပြတဲ့နည်းအပြောနဲ့ချပြတဲ့နည်းဒီကားကျတော့အပြောရောအပြပါနှစ်မျိုးလုံးပါပါတယ်ညွှန်းဆိုဒီအတိုင်းပြောလည်းဇာတ်ကားအရသာကိုပေါ်လွင်အောင်မပြောနိုင်ဘူးဗျကြည့်မှကြည့်လေကောင်းလေဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမျိုးပါနောက်ပြီးတော့တခုပြောချင်တာကဒီကားအတွက်စာဖိုင်ကနှစ်မျိုးထွက်နေတယ်နှစ်ခုလုံးကတော့မှန်သလိုလိုမှားသလိုလိုဖြစ်နေတယ်ဗျကျနော်ကesubကပဲပြန်တဲ့အပြင်ဂျပန်လိုလည်းမတတ်တော့နှစ်မျိုးလူံးယှဉ်ကြည့်တယ်မှန်မယ်ထင်တာယူဖြစ်တယ်ဗျဥပမာ ကြောင်မရုပ်လေးနာမည်ကိုစာဖိုင်တခုမှာအစထဲကပြောပြထားတယ်ဒါပမယ့် ကျနော့်အသံထွက်နားထောင်တော့နာမည်ကိုပြောသွားတယ်လို့မထင်လို့မပြောတဲ့စာဖိုင်ကိုပဲယူပါတယ်အတတ်နိုင်ဆုံးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေမယ့်လိုအပ်ချက်တွေရှိရင်ခွင့်လွှတ်ပေးပါသီချင်းတွေကိုလည်းမရရအောင်ရှာပြီးထည့်ပေးထားပါတယ်လိုက်ဆိုလို့ရအောင်လို့ပါ Translated by DrNyanEncoded by DrNyanRunning Time - 1hr50mins
Night Is Short, Walk on Girl (2017) Yoru wa Mijikashi Aruke yo Otome(The Night Is Short, Walk on Girl) Movie type-Comedy, Romantic, Music film,dance Translator-EliasEncoder-Loki_____________________________________ကဲကဲ ရယ်စရာ ကြည့်ချင့်တွ အုန်းသီးစားလေးတွေတွက်မင်မင်တို့ ဖန်းတီးပေးလိုက်ပါပီး [Morimi Tomihiko] ရဲ့Novelဝတ္ထုကိုအခြေခံထားတဲ့ကားလေးဖြစ်ပြီးအနက်ရောင်ဆံပင်နဲ့ မိန်းကလေးကကျိုတိုမြို့ရဲ့လမ်း‌တွေက Pontocho ရဲ့ညမြင်ကွင်းကနေ Shimogamo ကစာအုပ်အဟောင်းပြပွဲရယ်ပြီး‌တော့ ကျောင်းပြပွဲအဆုံး ညတစ်ညရဲ့အလှ‌တွေကိုခံစားဖို့လမ်းလျှောက်ကြတယ်ပေါ့အဲ့မှာသူ့ကိုကြိတ်ခွက်နေတဲ့ ‌မင်းသားကပေါ့နော်သူ့နောက်ကိုတစ်ကောက်၂လိုက်ရင်း သူမနဲ့‌တွေ့လို့ရှိမတော်တဆတွေ့တယ်ပေါ့ အယ့်လယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့သူမရဲ့အချစ်ကိုရရန် အခွင့်အလမ်းတွေရှာနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမယ့်စိတ်မကောင်းတာက ကောင်မလေးကမင်းသားကိုသတိတောင်မထားမိပါဘူးနောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုအလွဲလေးတွေ ဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်စောင့်ကြည့်လိုက်ပါSource ;Sugoi Japan ခုလို ချိန်မျိုးမှာLike and share လုပ်ခြင်းဖြင့်ကုသိုလ်ယူပါ#Loki
IMDB: 7.8/10 71 votes